Fiatrehana ny voina sy fanarenana (CERC) - Fonds d'Intervention pour le Développement
Mpiray ombon’antoka ara-teknika sy ara-bola
Fiatrehana ny voina sy Fanarenana dia tetikasan’ny Governemanta Malagasy miaraka amin’ireo mpiray ombon’antoka ara-teknika sy ara-bola. Tanjon’ny tetikasa ny hanampy ireo sokajin’olona marefo sy sahirana indrindra mba hanalefahana ny vokatry ny aretina COVID-19 ary hanohanana ireo tokantrano tratry ny haintany any atsimo. Fianakaviana marefo maherin’ny 398.000 no hotohanana amin’ny alàlan’ny vatsy ara-bola.
Ity tetikasa ity dia tafiditra ao anatin’ny drafitra nasionaly marolafy ho an’ny hamehana (PMDU), izay mikendry ny hamehezana ny fiparitahan’ny coronavirus, hanampy ireo vondron’olona marefo, hitazomana ny foto-karena olona ary hanamorana ny fanarenana ny toekarena. Mitentina 45 tapitrisa dolara ny vatsy ara-bola avy amin’ny Banky Iraisam-pirenena hampiharana ny tetikasa mandritra ny enim-bolana (6).
Fiatrehana ny voina sy fanarenana dia arindran’ny ny Minisiteran’ny Mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy (MPPSPF) miaraka amin’ny tohana afa-miasa avy hatrany avy amin’ny BNGRC, ny FID kosa no mpanatanteraka.
Ireo fandaharan’asa mandrafitra ny tetikasa
Vatsy ara-bola sy tantsoroka avy ami’ny Governemanta malagasy, miaraka amin’ireo mpiray ombon’antoka ara-teknika sy ara-bola.
Ny zara-andraikitra dia manatrika ny fiofanana ny mpisitraka.
Asa atakalo vola sy tantsoroka avy amin’ny Governemanta malagasy, miaraka amin’ireo mpiray ombon’antoka ara-teknika sy ara-bola.
Ny zara-andraikitra dia manatrika ny fiofanana ny mpisitraka ary mianatra any an-tsekoly ny zaza.
Vatsy ara-bola entina iatrehana ny haintany avy amin’ny Governemanta malagasy, miaraka amin’ireo mpiray ombon’antoka ara-teknika sy ara-bola.
Le tableau de bord du CONTINGENT EMERGENCY RESPONSE COMPONENT (CERC) au 29 Octobre 2021 – Téléchargeable ici